Raysdị ụzarị: otu esi akpụpụta ha yana njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Raysmụ mmadụ na-enwe mmasị na ụzarị ọkụ. Ọ bụ ike orùrù nke eke static ọkụ eletrik. Ọ na - apụtakarị n’oge mmiri ozuzo na - ewepụta ikuku electromagnetic. Mmiri eletrik a site na àmụmà na-esonyere nsị nke ọkụ a maara dị ka àmụmà na ụda a maara dị ka égbè eluigwe. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ụdị ụzarị dabere na mbido na ọdịdị ha nwere.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe ụdị ụzarị ọkụ dị iche iche na etu esi akpụ ha.
2 Nkuzi nke àmụmà
3 Dị àmụmà
Mmiri eletrik nke na-ebute site na àmụmà na-esonyere emission nke ìhè. A maara ọkụ ọkụ a dị ka àmụmà ma ọ bụ ihe kpatara site na ịgafe nke ọkụ eletrik nke na-eme ka mkpụrụ ndụ ikuku. Emesia, a nuru uda nke amara aha egbe okike mekwara site na ujo ahu. Ọkụ eletrik a na-emepụta na-agabiga na mbara igwe, na-ekpo ọkụ, na-agbasa ikuku ngwa ngwa ma na-amị ụda njirimara nke ala. Rayszarị ọkụ ahụ nọ n’ọnọdụ plasmatic.
Ogologo nke ray bụ ihe dị ka mita 1500. Dị ka ịmata ihe, na 2007, ọkụ ọkụ ọkụ kachasị ogologo edepụtara bụ mmanụ na Oklahoma ma rute kilomita 321 n'ogologo. Lightning na-agakarị na nkezi ọsọ nke ihe dị ka 440 kilomita kwa sekọnd ma nwee ike iru ọsọ nke ruru 1400 kilomita kwa sekọnd. Ihe dị iche iche dị na ya bụ nde volts m banyere ala. Ya mere, ụzarị ndị a nwere nnukwu ihe egwu. A na-ede ihe dị ka nde ifufe dị nde iri na isii n'akụkụ ụwa niile kwa afọ.
Ihe kachasị dị mma bụ na n'ụzarị ọkụ dị iche iche, a na-emepụta ha site na ihe ndị dị mma na ala na ihe na-adịghị mma na igwe ojii. Nke a bụ n'ihi mmepe kwụ ọtọ nke igwe ojii a na-akpọ cumulonimbus. Mgbe cumulonimbus ruru tropopause (njedebe mpaghara nke troposphere), ụgwọ dị mma nke igwe ojii nwere bụ maka ịdọta ebubo na-adịghị mma. Nke a mmegharị nke ebubo site na ikuku bụ ihe na-emepụta ụzarị ọkụ. Ọ na-abụkarị nsonaazụ na azụ pụta. Ọ na-ezo aka na irighiri ihe na-ebili ozugbo na ịlaghachi na-akpata ọhụụ nke ụzarị ahụ na-agbada.
Igwe na-egbu ọkụ nwere ike ịrụ otu nde watt ozugbo, nke a ga-akarị ka nke egwu nuklia. A na-akpọ ịdọ aka ná ntị n'ime ihu igwe nke na-ahụ maka ịmụ amụ àmụmà na ihe niile metụtara ya.
Nkuzi nke àmụmà
Otu esemokwu eletrik si amalite bụ ihe esemokwu. Ndị ọkà mmụta sayensị enwebeghị ike ịchọpụta ihe kpatara nke a. Ndị kacha mara amara bụ ndị na-ekwu na ọgba aghara nke ikuku bụ ihe kpatara mmalite nke ụdị àmụmà. Ọgba aghara ndị a na ikuku Ha bụ n'ihi mgbanwe ikuku, iru mmiri na nrụgide nke ikuku. A na-atụlekwa mmetụta nke ikuku anyanwụ na nchịkọta nke ihe ndị sitere na anyanwụ.
A na-eche Ice dị ka ihe dị mkpa na mmepe. Ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ ọrụ maka ịkwalite nkewa n'etiti ebubo dị mma na nke na-adịghị mma n'ime igwe ojii cumulonimbus. Lightning nwekwara ike ime n'igwe ojii site na mgbawa ugwu mgbawa, ma ọ bụ ọ nwere ike bụrụ nsonaazụ nke oke ọkụ ọkụ oke ohia nke na-ewepụta ájá nwere ike ịmepụta ụgwọ dị iche iche.
Na nkwuputa nke ntinye aka nke electrostatic anyị nwere na ebubo ndị a na-ebufe na usoro ndị ka edobeghị anya maka ụmụ mmadụ. Nkewa nke ebubo a chọrọ ikuku ikuku dị elu nke na-ahụ maka iburu ụmụ irighiri mmiri n'elu. N'ụzọ dị otú a, mgbe ụmụ irighiri mmiri na-eru elu dị elu ebe oyi na-agba gburugburu ikuku na-adị, ngwa ngwa jụrụ oyi. Nọmalị a etoju na-supercooled na okpomọkụ nke -10 na -20 ogo. Mkpokọta nke kristal ice na-eme ka mmiri na ice a na-akpọ akụ mmiri. Nsogbu ndị na-eme na-eme ka a kwụọ ụgwọ dịtụ mma na kristal ice na ụgwọ na-adịghị mma na akụ mmiri igwe.
Ugbu a, mmiri ahụ na-eme ka kristal na-acha ọkụ ọkụ dị elu ma na-eme ka ebubo dị mma wulite na igwe ojii. N'ikpeazụ, ihe ndọda nke ụwa bụ ihe na-eme ka akụ mmiri igwe ahụ daa na ebubo na-adịghị mma n'ihi na ọ dị arọ karịa etiti na n'akụkụ igwe ojii kachasị dị ala. Nkewa nke ebubo na nchịkọta na-aga n'ihu ruo mgbe ikike eletrik ga-ezu iji malite mgbapụta eletriki.
Echiche ọzọ dị maka usoro mgbasa ozi nwere ihe abụọ. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Ighapu ice na ụmụ irighiri mmiri na-ekewa elektrik n'oge ha dara site na ala eletrik eletrik.
Icera akpụrụ mmiri na ha na-adakọ ma na-akwụ ụgwọ site na nnabata electrostatic.
Dịka anyị kwurula na mbụ, e nwere ụzarị ọkụ dị iche iche nke nwere njirimara ụfọdụ. Igwe ọkụ ọkụ a na-ahụkarị bụ nke a na-ahụkarị ma mara dị ka ọkụ ọkụ. Nke a bụ akụkụ a na-ahụ anya nke nchọta ray. Imirikiti n'ime ha na-eme n'ime igwe ojii ka ha wee ghara ịhụ ha. Ka anyị lee ihe bụ isi ụdị ụzarị:
Igwe ojii na-ala: ọ bụ ihe a kacha mara amara na nke abụọ kachasị ama. Ọ na-anọchite anya egwu kachasị egwu nke ndụ na ihe onwunwe. Ọ nwere ike imetụta ụwa na ịkwụsị n'etiti igwe ojii cumulonimbus na ụwa.
Pearl ray: bụ ụdị igwe ojii na-acha ojii na ala nke na-egosi na ọ ga-abanye n'ime usoro nke obere, nke na-enwu gbaa.
Igwe ọkụ Staccato: Ọ bụ ụdị ígwé ojii ọzọ nke igwe ojii na ala ma nwee oge dị mkpirikpi nke yiri ka ọ bụ naanị ọkụ. Ọ na-adịkarị ọkụ ma nwee nnukwu mbibi.
Ejiri osisi: ha bụ ụzarị ahụ sitere na igwe ojii ruo na ala nke na-egosipụta ngọngọ nke ụzọ ha.
Igwe ojii ala ọkụ: ọ bụ ntopute n'etiti ụwa na igwe ojii nke na-ebido mbido elu elu. Ọ dị obere.
Igwe ojii na igwe ojii: Ọ na-adị n’etiti ebe anaghị emetụ ala. Ọ na-adịkarị mgbe igwe ojii abụọ dị iche iche na-ewepụta ọdịiche na ikike eletrik.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị ụzarị dị iche iche na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Dị àmụmà
Seismic mmiri na ebili mmiri